समाचार Archives - jagritikhabar.com
माधव नेपाललाई आले र झाँक्रीको धम्की: अपराधीलाई जस्तो गरियो, पार्टी फुटाउन सक्छौं
१० असार, काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्र मन्त्री फेरबदलको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्री फेरबदलको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई धम्की दिएका छन्। एक महिनायता समाजवादीका महासचिव बेदुराम...
Panasonic Malaysia ले श्रेणी अनुसार कामदारको न्युनतम तलब बढायो, कस्को कति भयो ..?
क्वालालम्पुर : मलेसियाको पानासोनिक कम्पनीले कामदारको न्युनतम तलब कामदारको श्रेणी अनुसार वृद्धि गरेको समाचार सार्वजनिक गरेको छ । मलेसिया सरकारले बिदेशी कामदारको लागि हालसम्म न्युनतम तलब RM 12 सय बाट 15 सय अनिवार्य गरेको छ । सो संगै मलेसिया कम्पनीले अब भने न्युनतम तलब...
मलेसियामा ३०० जना नेपालीको माग, न्युनतम तलब RM1500 ओभर टाइमको सुबिधा
काठमाडौं । मलेशियामा रोजगारको लागी ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको माग आएको छ । मलेसियाको एक कम्पनीको लागि ३०० जना नेपालीको माग आएको हो भने मासिक तलव रु ४२,५१० हुने साथै ओभर टाइमको सुविधा हुनेछ । इच्छुक बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकले सिधा सम्बन्धित...
कतार विश्वकपका लागि नेपालले पायो २८० वटा टिकट, कति छ मूल्य ?
९ असार, काठमाडौं । कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई २८० टिकट प्राप्त भएको छ । फिफा विश्वकपको टिकट विक्री गर्ने अधिकार पनि एन्फालाई दिएको छ । बिहीबार आगामी नोभेम्बर २१ देखि सुरु हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि २८०...
एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा प्रेम आले
९ असार, काठमाडौं । मन्त्री प्रेम आलेले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले आफू मन्त्रीबाट बाहिरिने भएपछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी तीव्र पारेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा गएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी...
श्रीलंकाद्वारा आफू टाट पल्टिएको घोषणा
९ असार, काठमाडौं । श्रीलंकाले आफू टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको बताउनु भएको हो । विदेशी मुद्राको अभावमा महिनौंदेखि धर्ममराउँदै आएको अर्थतन्त्र ढलेको उहाँको भनाइ छ । देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री...
९ असार, काठमाडौं । सुपर सोको ब्रान्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक डी–लाइफ स्टाइल्सले दैनिक १३९ रुपैयाँ किस्ता तिरेर विद्युतीय स्कुटर लिन सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सुपर सोको स्कुटर शुरुमा कुनै डाउन पेमेन्टविनै किन्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै ग्राहकले शून्य प्रतिशत...
बुद्ध एयरले माग्यो यात्रुसँग माफी, आगामी दिनमा उडान सेवा अवरुद्ध नहुने
९ असार, काठमाडौं । बुद्ध एयरले यात्रुसँग माफी मागेको छ। बुद्धले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सेवा बन्द गर्नु यथोचित निर्णय नभएको भन्दै माफी मागेको हो। बुद्ध एयरले आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा एयरलाइन्सको कारणले उडान सेवा अवरुद्ध नहुने बताएको छ। वायुसेवा कम्पनी यात्रुहरूको पारवहन सुविधा...
फ्रि भिषा, फ्रि टिकेट सहित मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्डको माग, बेसिक तलब RM1500+OT
काठमाडौं : मलेसियाको लागी नेपाली सुरक्षागार्डको माग आएको छ । मलेसियाको एक कम्पनीको लागि सुरक्षागार्डको लागी माग आएको हो । फ्रि भिषा फ्रि टिकेट सहित मलेशियामा रोजगारको ३० जना नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरुको माग आएको छ भने ओभर टाइमको सुविधा हुने बताइएको छ । बेसिक...
मलेसियामा बेसिक RM १५ सय नदिने कम्पनी माथी डण्डा चल्न सुरु !
क्वालालम्पुर : मलेसिया सरकारले अब सरकारले तोकेको न्युनतम तलब नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्युनतम तलब 15 सय नदिने काम्पनिलाई छापा हानेर कारबाही अगाडि बढाएको छ । मलेसिया सरकारले मे 1 तारिक देखि लागू हुने गरेर मलेसियामा सबै...
123 … 304 पछिल्ला »